Aqalka Sare ee Ruushka oo Putin ku Taageeray Crimea
Russian President Vladimir Putin chairs a meeting of the Security Council in Moscow's Kremlin, March 21, 2014.
Madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin ayaa sheegey in dalkiisa uu hakinayo talaabo uu cunaqabateyn ugu soo rogi lahaa Mareykanka, taas oo jawaab u ah cunaqabateynta Mareykanku saarey Ruushka oo la xiriirta xasaradda ka aloosan Ukraine.
Talaabadan ayaa ku soo beegmeysa iyadoo aqalka sare ee baarlamanka Ruushka uu cod buuxa ku ansixiyey in gobolka Crimea uu ka mid noqdo dhulka Ruushka. Aqalka hoose ee Ruushka ayaa go’aankaasi aqbaley shaley, maalmo kadib markii shacabka ku dhaqan Crimea ay u codeeyeen afti ay uga go’ayaan Ukraine uguna biirayaan Ruushka. Madaxweyne Putin iyo hoggaamiyeyaasha Crimea ayaa heshiiskaasi saxiixay maalintii Talaadada.
Xoghayaha Guud ee Qaramada Midoobay, Ban Ki-moon ayaa maanta magaalada Kiev kulan kula leh Madaxweynaha Ku-meel gaarka ee Ukraine, Oleksandr Turchynov, iyo Ku-simaha Raiisul Wasaaraha Arseniy Yatsenyuk, waxaana ay is la gorfeyn doonaan qaabka loo xalin karo mashaakilka taagan.
Maalintii Khamiista, Mr Ban waxaa uu magaalada Moscow kulan kula yeeshey Madaxweyne Putin iyo Wasiirka Arrimaha Dibedda ee Ruushka Sergei. Mr. Ban waxaa uu sheegey inuu ku booriyey hoggaamiyaha Ruushka inuu ka hortago dhibaato ka dhacda gudaha ama meel u dhow Ukraine oo dhalin karta xiisado dagaal.
Maalintii Arbacada, Madaxweynaha Mareykanka Barack Obama waxaa uu ku dhawaaqey cunaqabaten hor leh oo ka dhan ah Ruushka.
Isagoo ka hadlayey Aqalka Cad, Mr. Obama waxaa uu sheegey inuu talaabo ka qaadayo shakhsiyaad kale iyo banki la sheegey inuu gacan ka geystey duulaanka Ruushka ee gacanka ku yaala Bada Madow.
Goor siii horeysey ayaa Mareykanka waxaa uu xaddidey safarrada iyo dhaqdhaqaaqyada maaliyadeed ee shakhsiyaad muhiim ah oo Ruushan ah, kuwaas oo gacan ka geystey talaabada Ruushka ee qabsashada gobolka Crimea.